Basy saika hamidy : Nahafaty tsy nahy zazavavikely iray -
AccueilSongandinaBasy saika hamidy : Nahafaty tsy nahy zazavavikely iray
Voatifitra tsy nahy teo amin’ny faritry ny fony ny zazavavy kely iray, izany dia vokatry ny fivarotana basy tsy ara-dalàna nataona ramatoa iray tao amin’ny kaominina Betafo.
Mpanangom-bokatra ao Betafo no voalaza fa tena asan’ilay ramatoa, haka paoma ao Amparihimena no nialany tao an-tranony ny datin’ny 19 martsa lasa teo, kinanjo hivarotra basy no tena anton-diany. Niaraka tamin’ny zanany iray sy ny zana-drahaliny izy tamin’io fotoana io araka ny fanazavan’ny komandin’ny borigady Betafo GPHC Rakotoarisoa Andrimaminirina. Teo am-pamarotana ilay basy anefa, raha izy nikitikitika iny no nirefotra tampoka ny basy, ka tany amin’ilay zana-drahalahiny no niantefa. Teo amin’ny ambavafon’ilay zaza no niditra ny bala ka maty teno noho eo ilay zazavavikely tokony ho15 taona. Nafenin’ilay ramatoa ny zava-nisy marina, ary nambarany tamin’ny mpitsabo rehefa tonga tao amin’ny hopitaly fa notrongisin’ny omby ilay zaza. Taorian’ny fizahana dia nambaran’ny dokotera fa maty voatifitra ilay zaza fa tsy tsy notrongisin’ny omby akory, ary niantso ny zandary avy hatrany ny tompon’andraikitra. Voamarina fa voatifitra tokoa ilay zazavavikely, nametraka fitoriana ny ray aman-drenin’ilay zaza rehefa nahafantatra ny tena marina.
Niroso tamin’ny fisamborana sy fisavana ny tranon’ilay ramatoa ny zandary, ka tratra tao aminy ny basy poleta roa. Pasy poleta vita gasy saingy efa avo lenta avokoa, afa-mitaha amin’ireny basy avy any ivelany ireny mihitsy miaraka amin’ny famahana. Mbola hita teny amin’ny toerana nahafaty ilay zaza ihany koa ny vody bala 9mm nahafaty ilay zaza. Niaiky ny heloka vitany ilay ramatoa, ary nambarany fa hitady mpividy ilay basy mihitsy no tena anton-diany tamin’io fotoana io. Tsy nilaza mazava ny olona nahazoany ilay basy ilay ramatoa, nambarany fa olona sendra hitany tany an-tsena no nahazoany ireo basy ireo, ary nokasainy hamidy 2 50 000 Ar ny iray.
Nary ( Antsirabe)
Feno efa-taona ny alakamisy 25 janoary izao (25 janoary 2014- 25 janoary 2018) ny fianianan’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina tetsy Mahamasina tamin’ny naha voafidy azy hitantana ny firenena. Ho fankalazana izany indrindra, dia hanatanteraka seho lehibe ...Tohiny